Fety mitondra hafaliana ho an'ny Fianakaviana - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Wenceslas ms il y a 5 années
(Lahatsoratra nalaina tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3864, alahady 20 apirily 2014)
Ny fianakaviana sy ny hafaliana entin’ny Paka
Raha vao nitsangan-ko velona i Jesoa Tompo dia niseho tamin’ny mpianany ary niteny tamin’izy ireo hoe : « Ho aminareo anie ny fiadanana » (Jn 20, 19). Ary nanomboka hatreo dia teraka tao am-pon’ny Apositoly ny hafaliana ary resy ny tahotra !
Fiadanana, hafaliana no fanomezana vokatry ny Paka ho antsika. Hafaliana sy fiadanana nahatsapana ny halalin’ny fitiavan’Andriamanitra ny harivan’ny Alakamisy Masina izay nandraisana ny hafatrafatr’i Jesoa nitia ka nandidy antsika hifankatia ; ary namela izany tsangambato izany tamin’ny alalan’ny Eokaristia izay tsy inona fa fanolorany ny tenany ho antsika noho ny fitiavany antsika ihany.
Hafaliana sy fiadanana avy amin’ny fitopin’ny mason’i Jesoa feno famindram-po ambaran’ny Zoma Masina. Dia Izy ilay nitondra ny Hazofijaliana ka namela malalaka antsika ho afaka amin’ny vesatry ny ota, nanamaivana izany sy nandio mihitsy ary nanome famelana.
Hafaliana sy fiadanana niainana sy niandrasana ny fahanginan’ny Sabotsy Masina mba handraisana an’i Jesoa tafatsangan-ko velona.
Hafaliana sy fiadanana nandray ny fandresen’i Jesoa ny herin’ny fahafatesana, ny ratsy ary ny fijaliana rehetra. Velona tokoa i Kristy, nitsangan-ko velona izy ary tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana !
Endrika isehoan’ny hafaliana sy fiadanana
Na ny niainan’ireo roa lahy nankany Emaosy (Lk 24, 32-33), na ny niainan’i Toma (Jn 20, 27-28), na ny fifankahitan’ireo mpianatra nahita an’i Jesoa tao amin’ny Cénacle (Jn 20, 19-20), dia mampiseho ny fahadisoam-panantenana teo amin’izy ireo. Satria tsy araka ny niheveran’izy ireo azy no niafaran’i Jesoa. Saingy nisokatra ny mason’izy ireo rahefa nandroso an-trano i Jesoa, taorian’ny fampandrosan’izy ireo an-trano azy satria efa “mandrorona ny andro”.
Dia nandroso an-trano i Jesoa, io no famantarana hita maso fa nanana fisokafana marina tokoa izy roa lahy. Ny fon’izy ireo no efa nisikatra fa ny masony mbola tsy ao. Tonga anefa ny fotoana hahafantaran’izy mirahalahy ny marina dia avy amin’ny fihetsika nataon’i Jesoa teo am-pihinanana: nandray ny mofo Izy, nisaotra an’Andriamanitra, novakiany, natolony azy ireo.
Fihetsika nampisokatra ny mason’izy ireo io nataon’i Jesoa io ary toa tsy vaovao aminy fa nanokatra azy ireo avy hatrany ny fahatsiarovana ao an-tsaina mampatsiahy ilay teny hoe: “Ataovy izao ho fahatsiarovana ahy!”. Ny vokatr’io, tsy hita teo intsony i Jesoa, niverina nitodi-doha nankany Jerosalema iny alina iny ihany izy mirahalahy ary tafahaona tamin’ny mpianatra rehetra. Samy nitantara an-kafaliana ny zavatra hitany sy reny izy rehetra.
Ny hafaliana niainana teto izany dia ny fahitana indray ilay fiombonan’ny mpianatra saika rava. Samy faly avokoa izy rehetra fa nahita ny Tompo tafatsangan-ko velona.
Lesona ho an’ny fianakaviana
Tsy ilaozan’izay disadisa mety hahazo azy ny fiainam-pianakaviana. Ao ny vina noeritreretina nefa tsy araky ny nantenaina. Mety hahatonga fakam-panahy hisintaka tokoa ireny. Ohatra ho antsika anefa ny miseho eto. Ao anatin’ireny adim-piainana ireny no indro mijoro eo anivontsika fianakaviana Jesoa. Miray lalana amintsika ary miara-mandavorary fiainana ao. Toy ny nanabeazany an’izy mirahalahy no anabeazany antsika ihany koa. Miharihary eto ary fa ny olona no harena ary tsy azo atao ny manilikilika be fahantany ny hafa na ny sasany tsy mitovy amin’ny tena. Tsy azo atao ihany koa ny mijery arina an-tava fa rehefa tsy mety dia tsy mety. Ilaina dia ilaina ny fandalinam-pinoana eto ka hifanampiana ny amin’io: mila ny hafa hanazava izay tsy azo. Adidy atao ao anatin’ny fianakaviana io. Tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny ray aman-dreny. Ny finoana ananany no hifampizarany amin’ny zanany.
I Jesoa eto dia miseho ho toy ny loham-pianakaviana eo amin’ny fitantanana. Ny fihetsika nataony no nahatsiarovan’ireo mpianatra saina tampoka ka nanapahany hevitra hiverina hamonjy ny fiombonana. Toy izany, ny raim-pianakaviana dia tokony hitandro fatratra izany fiombonana misy ao anatin’ny fianakaviana izany ary ny fanabeazana omeny ireo zanany dia tokony hanampy azy ireo haka fanapahan-kevitra mazava tsara. Misongadina ihany koa fa ny fankalazana ny Eokaristia dia anisan’ny vanim-potoana mampiombona ny mpianakavy miaraka amin’i Kristy. Loharano anovozana ny soa rehetra satria orimbaton’ny famonjena antsika.
Manamafy antsika hiombona tokoa ny Eokaristia sady mampahatsiahy ihany koa ilay fitondrana iombonana hizakana ny anaran-dRay ao amin’ny Fiangonana noho ny Batemy noraisina avy amin’ny hafalian’ny Paka ihany koa. Ny misingana samirery dia toa matetika mamoa-tsampona toa an’i Toma. Tsy mahita ny fahitan’ny rehetra; nefa nony farany dia indro fa resy lahatra ihany izy ka nanamafy ny finoany. Na izany aza anefa dia ianarana ihany koa izy ilay tsy tonga dia mino be fahatany ireny fa manadihady aloha.
Fehiny, i Kristy no Pakantsika dia Izy ilay andry fototra ijoroan’ny fianakaviana. Mahalala ny fiainam-pianakaviana izy satria nahita ny nahazo ny olona tao Nazareta ihany koa.
MCCP Jubilé de Perle : Avance en eau profonde - il y a 1 moi
Pratique : Pourquoi mai est-il le « mois de Marie » ? - il y a 2 mois